स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति : सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने कोरोना परीक्षण शुल्क एकरुपता हुन्छ | Hakahaki
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति : सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले गर्ने कोरोना परीक्षण शुल्क एकरुपता हुन्छ
७ जेठ ०७७, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुले पीसीआर विधिबाट गर्ने कोरोना परीक्षण शुल्क एकरुपता हुने बताएका छन् ।
मंगलबार (हिजो) गरिएको नीतिगत निर्णयको बारेमा भ्रम सिर्जना भएपछि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुले पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने शुल्क एकरुपता हुने बताएका हुन् ।
कोभिड–१९को दैनिक अद्यावधिक विवरणबारे जानकारी दिनुअघि प्रवक्ता देवकोटाले नीतिगत निर्णयबारे प्रष्टोक्ति यसरी राखेका थिए, उनको भनाई जस्ताको तस्तै :
आज मैले सुरुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हिजो गरिएको एउटा नीतिगत निर्णयको बारेमा कन्फ्युजन क्रिएट भएको हुनाले, त्यो बारेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट आरटी पीसीआर विधिबाट परीक्षण स्वेच्छाले गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनियता तथा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने गरी, सो शर्तमा तोकिएका सार्वजनिक (पब्लिक) स्वास्थ्य संस्थाहरु, पब्लिक हस्पिटलहरु सरकारी तथा सामुदायिक गैरनाफामूलक अस्पतालहरुमार्फत् तोकिएको दर रेटमा, जो दर रेट उक्त अस्पतालहरुको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तय गर्ने गरी सशुल्क परीक्षण गर्नसक्ने नीतिगत निर्णय भएको सन्दर्भमा विभिन्न समाचार माध्यमहरु, अनलाइन खबरहरुमा ‘सो परीक्षणको मूल्य १५ हजारसम्म भएको र यो कुरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्णय गरेको’ भन्ने जस्ता समाचारहरु आएका हुनाले त्यो सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
हामीले अहिले पीसीआर विधीबाट गर्ने परीक्षणहरुको दायरा बढाइरहेका छौं । संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दैछ । यो संवेदनशील घडी हो; यस्तो संवेदनशील घडीमा पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गरेर संक्रमितहरुको पहिचान गर्ने एकमात्र विधि त्यस अन्तर्गत त्यो विधि हामीले विस्तार गरिरहेका छौं । हाम्रा १८ भन्दा बढी प्रयोगशालाहरुबाट यो परीक्षण हुन्छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न व्यक्तिहरु जो आफैं स्वेच्छाले सो परीक्षण गराउन चाहनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरु जो लाइनमा बस्न चाहनुहुन्न; जसलाई छिटो परीक्षण गर्न चाहना छ; जसको इच्छा छ परीक्षण गराउने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई त्यस्ता पब्लिक सार्वजनिक हस्पिटलहरुमा गएर त्यो टेस्ट गराउने; पीसीआर विधिबाट गराउने टेस्ट खुल्ला गरिएको छ । तर, त्यो विधिबाट गरिने परीक्षण शुल्क मन्त्रालयले एकरुपता हुने गरी तय गर्ने नै छ ।
प्रयोगशाला कस्तो हुने ? शुल्क कति लाग्ने ? सुरक्षा प्रबन्ध र अन्य प्रबन्धहरु कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? विषयमा हामीले छिट्टै निर्णय गर्नेछौं । र, त्यो निर्णय पश्चात यो लागू हुनेछ ।